Ebook Bilaash ah: Ma Ciyaaraysaa Lambarada Ciyaarta? | Martech Zone
Ebook Bilaash ah: Ma Ciyaaraysaa Lambarada Ciyaarta?
Khamiista, Febraayo 6, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan wax ka qornay sida loola dhacay Qofwalbo inaad ku dhiirrigeliso shaqaalahaaga inay sumcaddaada bulshada kor ugu qaadaan. Markii aan shaqada dhammeeyay ka dib, kooxdii halkaas joogtay ayaa ila soo xiriirtay oo i wareysatay aniga oo ku saabsan khibradeyda warbaahinta bulshada. Waxay qaateen natiijada waraysigaas oo way horumariyeen ebook qurux badan oo aad kala soo bixi karto degelkooda.
Maaha wax qurux badan sababta oo ah koobkaygu wuxuu ku yaal daboolka:)… waxay qabteen shaqo weyn oo ah qabashada codkayga iyo u qaabeynta wadahadalka liis su'aalo ah oo kooban jawaabtayda. Waxaan ka jawaabayaa su'aalahan:
Maxay macaamiishaadu raadinayaan?
Sideed ku garanaysaa kanaallada aad diiradda saareyso?
Boggu ma is beddelay oo sidee buu ugu habboon yahay istiraatiijiyad guud?
Sidee tayada loogu qeexay dhexdhexaadiyayaashan?
Maxay u egtahay inaad kobciso bulshadaada?
Waa maxay xaaladda warbaahinta bulshada ee hadda?
Sideed kuheli kartaa macmiil mustaqbalkiisa diirada saaraya isku beddelka taraafikada iyo waxyaabaha jecel?
Waa maxay diiraddaagu sanadka soo socda? Waa maxay isbeddelada waaweyn ee aad ku aragto adduunka?
Buug-gacmeedkani waa aragti fiican oo ku saabsan waxa aan ka hadli doono Dunida Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada dhammaadka Maarso. Waxaan si adag u aaminsanahay in boggag aad u tiro badan, khabiiro iyo xitaa barnaamijyo ay diirada saaraan la wareegida markay tahay baraha bulshada. Fursadda ugu cajaa'ibka badan warbaahinta bulshada ma aha wax la iibsasho ee waa haynta. Shirkaduhu waxay fursad u leeyihiin inay dhageystaan ​​oo ay xiriir la yeeshaan macaamiishooda hadda jira.
Buug-gacmeedkani waa iftiin la akhriyey… ma galayo nooc kasta oo shaqo socodka farsamada ah ama tilmaamaysa xallinta ama isdhexgalka kaa caawin doona. Kaliya waa hage weyn oo lagu helo ra'yigayga - oo laga soo qaatay sanado badan oo aan la shaqeynayay macaamiisheenna - oo daabacan. Mahadsanid Qofwalbo fursad aad tan uga hesho meeshaas! Waxay soo saaraan taxane ka mid ah buugaagta buugaagta yar oo laga soo xigtay dhowr hoggaamiye oo ka tirsan warshadaha - laga bilaabo dadka sida Sandy Carter, Amy Tennison, Jason Falls, Chris Brogan, Joe Pulizzi, Mari Smith… iyo kuwa kale.
Soo Degso Ebook Hadda!
Tags: Amy TennisonChris Brogandouglas karreBookqof walba bulshojason dhacoJoe PulizziMari SmithSandy Carter